हामी दुवै जना निर्वस्त्र भयौं र मैले सर को लाडो चुस्न थाले । - Nepali Sex Tube
म साह्रै नै प्यासी र पुरुषहरुको फरक फरक आकारको लिङ्ग/लाडो चाखी हिड्नु पर्ने बिबाहित आईमाई । पुरुष को संगत बिना आफुलाई कन्ट्रोल मा राख्न पनि हम्मे हम्मे पर्थ्यो मलाई । यी सब हुनुको पछाडी बुढो विदेश मा भएको ले होला भन्ठान्नु होला ! तर त्यसो होइन, म घरमा बुढा हुँदा पनि बुढालाई छलेर विभिन्न पुरुष साथि हरु संग आफ्नो प्यास मेटाउने गर्थें । बुढाले मेटाउन नसकेको यौन प्यास म अरु बाटै प्राप्त गर्दथें । अब म एक पटक घटेको रोमान्चक सेक्स घटना तपाई हरु सामु राख्न जाँदै छु ।
बिबेक मेरो केटा साथी, जस संग मेरो प्राय यौन समागम हुने गर्दथ्यो । बिबेक अलावा अरु पुरुष संग पनि मेरो चिकामारी चल्थ्यो, कहिले नजिकै स्कुल पढाउने सर संग त कहिले पुलिस संग त कहिले बजारका केटा हरु संग, इत्यादि । एकदिन सर र म सेक्स को प्लानिङ्ग मा थियौं । सर र म कोठामा वेलुकी रमाइलो गर्ने क्रममा तैयारी खानेकुरा देखि सबै सामान लिएर आयौं र कोठामा बस्यौं । हामी दुबै जना फ्रेस हुने भन्दै वाथरुम मा गयौं, त्यो विवेकले खाटमुनी वाट हेरी रहेको रहेछ । हामी दुवै जना एकैपटक वाथरुममा गएको देखेपछि विवेकको शंका वास्तविकता मा परिणत हुने लक्ष्यण देखेछ ।
वाथरुम वाट वाहिर आउन हामीलाई करिव आधा घण्टा लाग्यो, किनकी वाथरुम मै एक चिकाइ भ्याइसकेको थियौं, फ्रेसहुने क्रममा । त्यस पछि हामी कोठा मा आयौं र वियर र प्याकिङ्ग खानेकुरा झिकेर खान थाल्यौं । हामीले करिव करिव ६ वोटल जति वियर खाइसकेका थियौं, मलाइ साह्रै पिसाव लाग्यो । मलाइ अलि अलि लागी सकेको थियो, त्यहि भएर म अलि अश्लिल शव्द वोल्न थालिसकेको थिएँ ।
मलाइ लागेको वेलामा अश्लिल शव्द वोल्न पनि रमाइलो लाग्ने भैसकेको अर्थात वानी परि सकेको थियो । मेघ सरले पनि लागे पछि अश्लिल शव्द हल्का वोल्नु हुन्थ्यो । मैले म पिसाव फेर्न जान्छु संगै जाने, अनि फेरी वाथरुम मा अगि जस्तै चिक्ने भनेर मेघ सरलाइ सोधेको – म जान्न, तँ जा मुतेर आइज ! पुति वाट पानि झार्न मन लागेको छ भने हातले चलाएर झारेर आइज, अनि सावुन पानि ले राम्रो संग पखालेर आइज। आज मलाइ साह्रै तेरो पुति चाट्न मन लागेको छ भनेर अलि मातिएको भाषा मा वोल्न थाल्नु भयो ।
म वाथरुम गएँ मुते, साँच्चै मलाइ पानी फाल्न मन लाग्यो र मैले पानी फाल्ने विचार गरेर वाथरुमको ह्याण्ड सावर मेरो पुतिमा घुसार्न लागें । करिव १५ मिनेट जति घुसारेर हातले माडे पछि मैले मेरो पुती सावुन पानीले राम्ररी धोएर कोठामा आएँ । मलाइ त वियरले छोड्न लागे जस्तो छ सर भने । मेघ सरले मुतेर आए पछि यस्तै हुन्छ, पख म पनि मुतेर आउछु अनि फेरी खानुपर्छ वियर भन्न थाल्नु भयो । सर वाथरुम वाट आउनु भयो र फेरी हामी वियर खान थाल्यौं ।
वियर खाँदा खाँदा मलाइ वढि अस्लिल शव्द वोल्न मन लाग्यो र सरलाइ – सर अव चिक्ने होइन ? यो मुडमा चिक्नु पर्छ क्या भने । सरले पनि ल ल चिक्ने हो भन्न थाल्नु भयो र के छ र! आज त हामी रातभर चिक्नु पर्छ भनेर मेरो नजिक आएर टासिएर बस्नु भयो । मैले सरको पाइण्ट खोलें र सर को लाडो कट्टु वाट वाहिर निकाले । यो कट्टु अनि मेरो माथीको सवै लुगा फुकालिदे भनेर सरले भन्नु भयो, मैले सवै त्यसै गरें । सरले तेरो पनि सवै लुगा फुकाल भन्नुभयो र मेरोपनि सवै लुगा फुकालें । हामी दुवै जना निर्वस्त्र भयौं र मैले सर को लाडो चुस्न थाले । मैले वेला वेला भन्दै थिए, त्यो वियर भन्दा त यो लाडो चुसाई को स्वाद पो रमाइलो छ सर भनें ।
धेरै वेर सर को लाडो चुसें तर सरको उत्तेजना नै आएन, सायद वियर धेरै भएर होला । मलाइ त साह्रै चिक्न मन लागिसकेको थियो । अनि सर लाई भनें – सर मैले अघि मुतेर आउँदा मेरो पुति राम्रो संग सावुन पानीले धोएर आएको छु । चाट्छु भन्नु भएको होइन ल चाट्नु ! भनेर पुति सरको मुख तिर राखें ।
सरले मोरी पुति चाट्दा साह्रै रमाइलो मान्छे, आज मजाले सफा गरिदिन्छु तिम्रो कुवा । यस्तो रमाइलो त मेरो स्वास्नी ले पनि गर्दैन । यस्तो रमाइलो मेरो घरको स्वास्नीले गर्ने भए म किन तँ का आउथेर ! वेला वेलामा पुतिवाट मुख निकाल्दै यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
मेरो श्रीमान ले पनि यसरी मेरो पुति चाट्न दिने र लाडो चुस्न दिने भए त म किन यस्तो हुन्थें र ! भनेर मजा मानि मानि भन्दै थिएँ । तर मलाइ मेरो श्रीमान ले मेरो पुति नचाटेर वा मलाइ लाडो चुस्न नदिएर यस्तो चिकामारी गर्दै हिड्ने गरेको होइन । मलाई पहिलो पटक दुर्गा वहादुर सरले यो वानी लगाएकोले धेरै प्रकारको लाडो चाहार्ने वानी परेको हो । सर ले धेरै समय सम्म मेरो पुति अरु दिन भन्दा रमाइलो गरेर चाटिरहनु भयो, मेरो पुति ले धेरै पानी फाल्न थालेको थियो । यसपछि मैले सर को लाडो पनि चुस्न थालें, विस्तारै सर को लाडोले आफ्नो पुर्ण आकार लियो ।
त्यसपछि सरले मेरो हिलाम्य खेतरुपी पुति मा धानको विरुवा रुपी लाडो छिराएर लामो समय सम्म भित्र-वाहिर गर्नु भयो । वियर को नशाका कारण होकी साह्रै लामो समय लगाउनु भयो सरले । करिव ११ वजी सकेको थियो, सरको लाडोले हिलो माथी झन हिलो थप्यो, त्यसपछि सर मरो माथी नै लादो ननिकाली सुत्नु भयो । हामीले वेडमा सेक्स नगरि वियर खाएको सुरमा भुइमा नै चिकेको थियौं, मैले सरलाइ उठाएर माथी सुताउन सकिन र म पनि सर संगै केहिवेर पछि वत्ति निभाएर सुतें भुइमै । हामीले वत्तिवालेर नै चिकेका थियौं ।
Categories Indian Sex Stories, Nepali Sex Story, New Sex Story, नेपाली यौन कथा, नेपाली सेक्स स्टोरी, यौन कथा Post navigation
मैले दोस्रो धक्का दिए अनि पुरै भित्र पस्यो